ऋणबाट मुक्त हुन ! यी वृक्षको साहारा लिनुहोस् – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/ऋणबाट मुक्त हुन ! यी वृक्षको साहारा लिनुहोस्
ऋणबाट मुक्त हुन ! यी वृक्षको साहारा लिनुहोस्
काठमाडौ – ऋणमा डुबेका मानिसहरु ऋणबाट मुक्त हुन चाहेकै हुन्छन् । धेरैले आफुलाई आर्थिक समस्या पर्दा ऋण लिने गर्छन् । तर उक्त ऋण समयमा फिर्ता गर्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ । ऋण तिर्ने समयमा विभिन्न समस्याले गर्दा तिर्न मुस्कील पर्ने गर्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार उचित बार र नक्षत्रमा ऋण लिएको छैन भने त्यो ऋण तिर्न निकै कठिन हुने गर्छ ।
त्यसैले ऋण लिदा उचित बार पारेमा राम्रो हुन्छ । धेरै मानिसहरु ऋणमा डुबेकै हुन्छन् । पैसा हुँदा पनि मानिसहरु ऋण तिर्न असमर्थ छन् । यदि तपाईलाई पनि यस्तो समस्या छ भने केहि वृक्षको साहाराले ऋणबाट मुक्ति हुन सकिन्छ ।
वरको पातमा पीठोको बत्ती जलाएर मंगलबार वरको रूखमुनि राखेमा ऋणबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । त्यस्तै नियमित ७ शनिबार कुवाको पानी पीपलको रूखमा ल्याएर चढाउँनुहोस् । शनिवारकै दिन पिपलको रुखमुनी दियो बाल्नुहोस् ।
नरिवलको रूख हिन्दू धर्ममा कुनै पनि पुजा गर्दा नरिवल प्रयोग गर्ने गरिन्छ । पुजामा कलशमाथि नरिवल राख्ने गरिन्छ । एउटा नरिवलमा चमेलीको तेलमा सिन्दूरको साथ स्वस्तिक प्रतीक बनाएर हनुमानजीको मन्दिरमा गएर चढाएमा धेरै लाभ हुन्छ ।
व्यवसायमा लगातार घाटा भइरहेको छ भने नरिवलमा पहेंलो कपडामा लपेटि विष्णु मन्दिरमा चढाएमा राम्रो हुन्छ । ऋणबाट मुक्ति र समृद्धिको लागि केराको रूखको पुजा गर्नुपर्दछ ।
१२ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट मृत्यु हुनेको संख्या ५० हजारको नजिक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अप्रिल महिनामा मात्र अमेरिकामा औसतमा दैनिक दुई हजार मानिसको मृत्यु भएको देखिएको छ ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट जर्मनीमा मृत्यु हुनेको संख्या पाँच हजार नाघेको छ । बिहीबार दिइएको जानकारीअनुसार जर्मनीमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पाँच हजार ९४ पुगेको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र जर्मनीमा दुई सय १५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जर्मनीमा अहिलेसम्म संक्रमित हुने मानिसको संख्या एक लाख ४८ हजार नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र जर्मनीमा दुई हजार तीन सय ५२ जना मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको थियो ।
यसैबीच जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले जर्मनीका मानिसहरुलाई सावधान तथा होसियार रहन आग्रह गरेकी छन् । उनले मानिसहरुलाई कोरोना भाइरसको आगामी चणको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले कोरोना भाइरसको महामारी अझै लामो समयसम्म रहन सक्ने उनको भनाइ छ ।
मर्केलले अहिले लगाइएको प्रतिबन्ध लोकतन्त्रका लागि चुनौती रहेको पनि बताएकी छन् । यसले मानिसको अधिकार सीमित गरेको भए पनि प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका कुरा सहन पनि सहज भएको बताएकी छन् ।उनले जर्मनीका मानिसहरुले एकअर्काप्रति देखाएको सद्भावको प्रशंसा गरिन् । स्रोत : बीबीसी
अन्य समाचार, कतारका विभिन्न जेलमा रहेका १७ जना नेपालीहरुले आममाफी पाएका छन् ।कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएकाले कैदीहरुको स्वास्थ्य र मानवीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कतारका राजाले केही कैदीहरुलाई आममाफी दिने निर्णय गरेका छन् ।
सोही निर्णयअनुसार १७ जना नेपालीले पनि आममाफी पाएका दोहास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।दूतावासका अनुसार कतारको बन्दी गृहमा रहेका १७ जना नेपाली नागरिकहरु अब रिहा हुनेछन् ।
रिहा हुनेहरुमा १३ जना लागू औषध कोरोबार, २ जना चोरी, १ जना मादक पदार्थ कारोबार र अर्का १ जना ठगीको कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेकाहरु छन् । हेर्नुहोस् दूतावासले सार्वजनिक गरेको सूचना
जब कोरोना संक्रमणको शंका भयो अन्शु उनै हुन् जसलाई गत चैत १५ गते कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भयो । ४ गते घर पुगेकी उनी सामान्य तरिकाले नै बसिरहेकी थिइन् । विश्वभरी महामारीको रुप लिँदै गरेको कोरोनाभाइरसको संक्रमणबारे जानकार थिइन् उनी । बेल्जियमबाट आउँदा पनि मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै सतर्कता अपनाएको र घर आएपछि पनि सुरुमा परिवारसँग सँगै बसे पनि सतर्कता अपनाएको उनी बताउँछिन् ।
ममीको धेरै फोन आउँछ अन्शु आइसोलेशनमा बसेको वैशाख ९ गते २५ दिन भयो । धेरैजसो समय उनको ममी (आमा, जो बेल्जियममै हुनुहुन्छ)सँग कुरा गरेर बित्छ । हरेक पटक आमाले ठिक हुन्छ भन्दै उत्साह भर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । बाँकी समय साथीहरुसँग कुराकानी गर्ने, यूट्यूवमा फिल्म हेर्ने अनि पढाइमा बिताउने गरेकी छिन् ।
अस्पताल नै घर, डाक्टर अनि नर्स परिवार अन्शुको अस्पताल बसाई चार हप्ता पुग्न लागिसक्यो । उनलाई अस्पताल अब घरजस्तै लाग्न थालेको छ । सबैजनाले राम्रो केयर गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
पुनः परीक्षाको तयारीमा अन्शु बेल्जियम आमाबुवालाई भेट्न गएकी थिइन् गत मंसिर (डिसेम्बर)मा । कक्षा ११ को परीक्षा नजिकिँदै थियो । अतः परीक्षाकै लागि भनेर उनी हतार हतार फर्केको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘बेल्जियम गएपछि पनि केही समय त बाहिरतिर डुलेँ, तर पछि भने घरै बसेँ । कसरी संक्रमण भयो भन्ने नै थाहा नहुने रहेछ ।’